Qiso Cajiib Ah: Nin Haleysnaa oo aan Xumaanta iyo wanaaga kala garaneyn’! oo jeclaaday gabar aad u dhowrsan oo wadaad ah’. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Qiso Cajiib Ah: Nin Haleysnaa oo aan Xumaanta iyo wanaaga kala garaneyn’! oo jeclaaday gabar aad u dhowrsan oo wadaad ah’.
Nin Haleysnaa oo aan Xumaanta iyo wanaaga kala garaneyn’! oo jeclaaday gabar aad u dhowrsan oo wadaad ah’
“Wuxuu yiri ”Waxaan ahaa mid aanan tukan salaadda, sigaarka afuufa, xumaha iska walaaqdo, ma aanan dareensaneen dembi, toobana haba sheegin. Waxaan ku farxi jirey inaan ahay Muslim, naxariista Rabbina ay weyntahay, laakiin waxaan illawsanaa in ciqaabtiisu ay daran tahay, qabashadiisuna aanan laga baxsan karin. Weligey masjidka ma geliin, inkastoo uu weli ii dhawaa. Xilli kasta waxaan maqli jirey aadaanka salaadaha, laakiin ma ajiibi jirin. Bisha Ramadan markay soo gasha, waa bisha kaliya ee aan tukan jirey, waana soomi jirey.
Ma aqaan sababtu, ma bishaas ayaan caabbudi jirey. Sidaas oo ay tahay xataa bishaas ma geli jirin masjidka. Habeenkii waxaan u degi jirey si aan saaxiibadeyda ula soo dhafro. Marmarna galab hore ayaan bixi jirey oo aan magaallada geli jirey. Kama aan fikiri jirin guur iyo carruur iyo mustaqbal midna inkastoo aan wax ku darsaday da’dii 35aad.
Markkaan gurigeyga kasoo baxaya ayaa waxaan jidka horteyda ku arki jiray gabadh iyada dhan wada xijaaban, oo masjidka inoo dhaw galaysa. Waxaan iska dhaadhiciyey si aan gabadhaas kula hadli lahaa oo aan gurigeyga ku keensan lahaa. Nafteyda xumaan ayay iiqurxineysaa, iima muuqata heybada iyo sharafta ka muuqata gabadha. Markay socota waxaad mooddaa waddada ka bax in la yiri, derbiga ayay isku dhejin jirtay. Inta badan waxaan arki jirey ayadoo u socota salaadda Casarka.
Waxaan Goostay inaan la hadlo, laakiin iima jawaabto, dhowr galab haddii aan sidaasi u bartilmaameedsan jiray bay i dhibsatay, galabtii dambe ayayna go’aansatay inay ila hadasho. Meel aan albaabka gurigeyga ka fogeyn ayay mareysay. Markaasay igu tiri ”Maxaad iga rabtaa walaal”? Waxaan ku dhahay ”Waxbo soo dhaaf, gurigeyga soo gal, waa keligey oo qura, cidna ma joogta”.
Marka aan hadalka iyo kaftanka ku badiyey, oo ay u jeedda iyadana inaan ahay qof Ilaahay ka fog, ma i canaanan, mana igu xanaaqin, balse waxay igu xirtay shuruud inay gurigeyga soo gasho. Waxay tiri ”Gurigaada waan soo geli doonaa, weliba sariirtaada waan ku fadhiisan doonaa, haddii aad kasoo baxda shuruuddan”.
Intaan farxay ayaan kudhahay, ”Maxay tahay shuruudda, wallaahi waan kasoo bixi doonaaye”? Waxay tiri ”Afartan casho (40 maalin) waa inaad masjidka ku tukataa salaadaha, oo aad casarkii iyo subaxa kadib aad dhagaysata duruusta masjidka inshallaah. Kadib anna waan kuu fulin doonaa ballantii.
”Hayeh!! waan yeeli doonaa” ayaan kudhahay, kadibna way baxday. Halkii baan howshii ka billaabay aniguna anoo fulinaya ballantii, laakiin labo usbuuc gudahooda anigii dhan waan is baddalay. Waxaan is arkay anigoo ooynaya mar walba markii aan ogaaday halka aan kusocday iyo baadida i haystay, mar kasta waan ka shallaayaa inaan illawsanaa hadalkii nebigeenna suubban (NNKH) ee ahaa annaga (Muslimiinta ah) iyo iyaga (Gaalada) xarigga inoo dhexeeya waa Salaadda, kii ka tegaana waa gaal. Toobad nasuuxa ayaan toobbad keenay, waxaana intaa kadib noqday qof ka qoomameeyo falkii uu sameyn jirey, waxaana noqday qof masjidka ku xiran oo salaad kasta safka hore taagan. Waxaan heley raaxo iyo iimaan, inkastoo aan ooyn jirey markastoo aan soo xasuusto falalkeygii xumaa.
Subaxii ay 40 cisho kasoowareegtay ayay ii timid gabadhii, salaanta Islamka kadib waxay igu tiri, haye ma kuu fuliyaa ballantaadii? Waxaan kudhahay ”Macaadallaah!! walaasheyeey!! aad baan uga shallaayaa hadalkii aan ku dhahay, dhanka kalena waxaan ku farxaa inaad hanuunkeyga sabab u noqotay, orod iska laabo Allaha ku xifdiyee!!!”.
Muddo yar gabadhii markay aragtay wanaaggeyga iyo sida aan mar walba masjidka ugu xiranay, way ila soo xidhiidhay, waxayna iisoo bandhigtay guur. Kaalmada Alle darteedna wuu inoo fududaaday guurkaas, waxayna noqotay xaaskeyga aan jeclahay. Waxayna noqotay gabadhii ababta u noqotay hanuunkeyga.
Adiga ahaan oo kobciyemedia.com akhrisanayo gabadh-yahay haddii wiil ciyaal suuq uu jidka kugula kulmo adigoo masjid usocotid, sidee ayaad kula macaamili lahayd?
( ILAAHAYOOW DARIIQA TOOSAN NAGU HANUUNI YAA RABI )
Ninkaaga Hala Wadaagin Sirtaada Hadii Kale Waxaa Dhici Karo Arimahaan Oo Kale..
KaLaFoGe May 26, 2014 May 25, 2014
Waannooyin Muhiim U ah Nafta: Lix Talo Oo Haddii Aad Ku Dhaqanto Kaa Caawinaya In Aad Ka Adkaato Ceebahaaga.
KaLaFoGe March 25, 2015 March 22, 2015
Video: Sheekh Mohamed Idiris: Ciida Iyo dhacdooyinkii Xajka Aan Kala Kulmay Sanadkaan..
KaLaFoGe October 6, 2014 October 5, 2014